Iva Red Hat Certified Engineer | RHCE Certification
Sei uye Sei Kuti Uwane Red Hat Certified Engineer Certification
Nzira yekuwana sei Red Hat Certified Engineer Certification?
Chii chiri kuongorora RHCSA?
Heino mutsara weRHCSA yekuongorora koti:
Sei Uchiwana Red Hat Certified Engineer Certification?
Chirongwa cheRot Hat Certified Engineer (RHCE) chinochengetedzwa neRed Hat Certified System Administrator (RHCSA) ane unyanzvi humwe, pfungwa, uye unyanzvi hunodiwa wepamusoro-mamiriro ekugadzirisa mutungamiri ane hurumende dze Red Hat Enterprise Linux® (RHEL) . Iwe unogona kutendeuka kuva RHCE kana iwe ukaona kugadzirira RHSCA uye watikunda kukubvumira kwako.
RHCSA kuvimbiswa isimiriro pakati pezvinonyanya kuzivikanwa kubva kuRud Hat amass. Kazhinji, Red Hat inopa mvumo yekusimbisa mushure mekugadzirwa kwepurogiramu yekugadzirira. Iri kugadzirirwa rakagadzirirwa kune vadzidzisi veItatu pane nzvimbo dzakasiyana-siyana dzepakati dzinoshandiswa nekuita mabasa anonyanya kukonzera Linux kusanganisira kuisa, kuumba ukama hwekubatanidza, kuchengetedza kuchengetedza muviri, nekuchengetedzwa kwekuchengeteka kwepamusoro.
Kana muchiedza kugumisa pachena RHCE, munofanira kuenda kuRaff Hat Website uye kutsvaga mushumiri akachengetedzwa akachengetedzwa munharaunda yako. Iwe unogona kutaurirana nevanodzidza uye kunyora RHCSA. Kuti ubvise Red Hat Certified Engineer kuongorora, iwe unofanirwa kutora mune imwe neimwe yezvidzidzo zvegadziriro yekugadzirira uye nekuwedzera mahedheni akasiyana, semuenzaniso, chirongwa chekubatanidza mambure. Zvidzidzo zvinowanikwa mune zvigadzirwa zvekugadzirisa uye zvidzidzo zvakapiwa nevanenge vachigadzirira. Iwe unogona kuratidza kuongorora kweRuff Hat kuongororwa nguva yako. Chidzidzo chekuedza chinotungamirirwa pane hurongwa hwakachengeteka mukutsvaga kwekutarisa kwekutarisa kwekutarisa. Uyezve, iwe unogona kutora gander pane zvakasiyana Red Hat kugadzirira zvisarudzo uye nekugadzirisa zvirongwa zvako zvekuongorora.
RHCSA kuongorora maitiro ekuongorora kunopa nheyo kune vanotarisira kuedza kugumisa Linux hurongwa hwevatungamiri kuburikidza nekuratidzwa kwekodzero yekutsvaga mutsara mutsara uye mamwe majekiti ekuwedzera mazinga. Aya mafungiro anowedzera kutaridzirwa mune purojekiti iri, Red Hat System Administration II.
Nhanganyaya yekuraira mutsara mazano
Kuwanika kuLinux mafaira mafaira
Kudzidza kuiswa uye kugadzirirwa kwepurogiramu yepurogiramu uye zvikamu
Kugadzira nekushandisa mitemo yakanaka
Kuisa firewall access uye network connections
Kutungamirira kuchengetedza mumuviri
Kutungamira nekutarisa nzira
Kuongororazve mafaira emagwaro ehurongwa
Kuchengeta uye kudzora mafaira
Kutarisira mapoka uye vashandisi
RHCSA chisimbiso chinokosha pakushandura muRHCE. Iro Red Hat confirmation course inowedzera kune vadzidzisi, vatungamiri vehurongwa, vashandi vekushanda, vanogadzirisa, uye vashandi vekugadzira pasinei nekugadzirisa uye gore revatongi, vanoita RHEL muT IT yavo nheyo. Dzidzo inotsigira vakwikwidzi vanozove vakanyatsoziva muRHEL nekukumbira mvumo yekusimbiswa muchiedza chekuuraya. Mukudarika kudarika Red Hat kuongororwa kwekuongorora, unowana kugamuchira kweR Red Hat yakasimbiswa tenzi. Izvi zvinokupa mukana wekuzadzikisa boka revanhu vane Red Hat, kuungana nevanokwanisa vashandi, faira kufungidzira kuungana uye kubatanidzwa pamabasa.
Nepo mamwe maitiro ekubvumirwa anokumbira kuzadza-in-the-clear or multiple inquiries kumusarudzo maererano nehumwe hutsika, Red Hat inoda kuti iwe utungamirire uye upike mabasa echokwadi anoshandisa Red Hat kukwanisa kuchengeta mupfungwa mugumo wekupedzisira kujekesa mhinduro dzayo. Pasinei nekuti hapana zvibvumirano zvakagamuchirwa zvechikoro ichi, ruzivo rwakabatana mukushanda hurongwa hwekutarisira huchava hukuru hwakakosha.
Nzira Yekugadzira Rabhi yeRHCSA? | RHCSA Lab
ASP.NET pane OpenShift: Kutanga mu ASP.NET